कांग्रेसको हार र नेतृत्व परिवर्तनबारे... :: भानुभक्त :: Setopati
कांग्रेसको हार र नेतृत्व परिवर्तनबारे के भन्छन्, विश्वप्रकाश, गगन र प्रदीप?
नेपाली कांग्रेसका सात यूवा नेताले चुनावको समीक्षा गर्न तत्काल केन्द्रीय समिति र महासमिति बोलाउनुपर्ने भन्दै आइतबार वक्तव्य निकाले।
‘निर्वाचनको सम्भावित परिणामबारे पूर्वाभास हुँदाहुँदै यस विषयमा हाम्रो नेतृत्व किन समयमै सचेत हुन सकेन? तद्अनुकुल निर्वाचन रणनीति किन अख्तियार भएन? पार्टीका सबै तहदेखि भातृसंस्थाहरुको समुचित परिचालन किन भएन? हामीले नेतृत्व गरेको सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न किन सकेन? यी र यस्ता अनेकौँ पेचिला प्रश्न हामीसामू छन्,’ वक्तव्यमा उनीहरूले भनेका छन्, ‘यस विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर र निर्मम समीक्षा जरुरी छ। यसका निम्ति तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमितिको बैठक बोलाउन पार्टी नेतृत्व समक्ष माग गर्दछौं।’
केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरूराज घिमिरे, गगन थापा, प्रदीप पौडेल र बद्री पाण्डेले आफू पनि बदलिने र कांग्रेसलाई पनि बदल्ने भन्दै उक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन्।
उक्त वक्तव्यमार्फत कांग्रेस हारका कारण खोजी गर्ने र आगामी दिनमा कांग्रेसलाई अझै बलियो बनाउने प्रण पनि उनीहरुले गरेका छन्।
‘नेपाली कांग्रेसले आजका चुनौतीको सामना गर्न गम्भीर आत्मचिन्तन र विषेश तयारी गर्न आवश्यक छ ,त्यसका लागि पार्टीभित्र वृहत्तर एकता हुनुपर्छ। पार्टीका साथीहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा र प्रदीप पौडेललाई हामीले सोध्यौं- कांग्रेसको चुनावी पराजय र नेतृत्व परिवर्तनबारे तपाईं धारणा के हो?
हिजो नै हामी सात युवा नेताले विज्ञप्ति जारी गर्नुका दुईवटा सन्देश छन्।
पहिलो, पुस १६ गते मेलमिलाप दिवस हो। वीपी कोइरालाले मेलमिलाप नीतिलाई सम्झेर यही दिन हामी कांग्रेसीहरु पनि फेरि मिलेर जानुपर्छ।
दोस्रो, हामी जसले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छौं, पार्टीभित्रको फरक फरक समूहमा छौं। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र प्रतिष्पर्धा र फरक मत हुनु सामान्य कुरा हो। तर जब पार्टी अप्ठेरो अवस्थामा पर्छ हामी एकै ठाउँमा उभिन्छौं।
चुनावमा कांग्रेसले नराम्रो हार व्यहोरेको छ। यसको समीक्षा हुनुपर्छ। त्यस्तो समीक्षा आवेगमा होइन, विवेकमा हुनुपर्छ।
अहिलेको समस्याको विवेकसम्मत उपचार गर्ने विधि केन्द्रीय समिति हुँदै महासमिति हो। एकैचोटि विशेष महाधिवेशन बोलाउन होइन। अहिलेको हारमा नेतृत्वको दोष छ, नेतृत्वबाट टिकट लिएर जानेको दोष छ। टिकट पाउने तर चुनाव नजित्ने मजस्ताको पनि दोष छ। मात्रा फरक छ तर हामी सबै दोषका भागिदार छौं।
त्यही भएर हामीले पहिला केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन र त्यसपछि महासमिति बैठकमा पार्टी हारको कारण र आगामी योजना बनाउन माग गरेका छौं।
म पहिला पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा थिइनँ, आज पनि छैन। बरु पहिला विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने साथीहरुले अहिले त्यो माग छोड्नुभएको छ। हिजोको विज्ञप्तिको सन्देश त्यो पनि हो।
हामी आफू नसुध्रिएर अमुक नेतृत्वमात्र सुध्रिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। कांग्रेसलाई राम्रो बनाउन पहिला हामी सबै सुध्रिनुपर्छ।
हामीले खासमा नेतृत्वलाई महासमिति बैठक बोलाउ भनेको हो। अहिलेको अवस्थामा गर्नुपर्ने निर्णयहरु महासमिति र महाधिवेशनले बाहेक कसैले गर्दैन। गर्न पनि सक्दैन। महासमितिको बैठक त्यसै पनि बोलाउनुपर्थ्यो। यत्रो पार्टीको चुनाव भयो, त्यो मात्र हैन देशको राजनीति नै फेरिइसक्यो। मुलुक संघीय संरचनामा गैसक्यो। यति धेरै कुरा आइसकेपछि त महासमिति बैठक बोलाएर छलफल गरेर कतातिर जाने भन्ने एउटा बाटो खोज्नुपर्यो कम्तिमा। यतिमात्र भए पनि गरौं भनेको हो।
तर महासमितिमा के गर्ने त्यसले के गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा फरक फरक धारणा छन्।
महाधिवेशन गर्न कम्तिमा पनि साढे दुई वर्ष लाग्छ। तर अहिलेको संरचनामा त पार्टी अघि बढ्न सक्दैन। हाम्रो १३ औं महाधिवेशनले बनाएको संरचना त जिल्ला, क्षेत्र गाविसको र नगरपालिकाको थियो। अहिले केन्द्रीय समितिबाहेक कुनै पनि काम नलाग्ने भैसक्यो। तल पार्टीको कुनै संरचना नै छैन। पहिले २४० क्षेत्र थिए। अहिले निर्वाचन क्षेत्रै फेरिए।
पार्टीको संरचना पनि काम लागेन। पोलिसीमा पनि ठूलो डिपार्चर चाहियो, अर्को कुरा संविधान निर्माणपछि हाम्रो पार्टीको बाटो के हो त अब? हाम्रो एजेन्डा पनि चाहियो भन्ने हो।
विशेष महाधिवेशनबाट एउटा पुस्ताले नेतृत्व छोड्नुपर्छ भन्ने हो। नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो। जसको नेतृत्वमा २५ वर्षजति पार्टी चल्यो उहाँहरूले विशेष महाधिवेशनबाट अवकास लिनुपर्‍यो।
जहाँसम्म कसरी भन्ने प्रश्न छ, अहिले हाम्रो आग्रह हो, २०४८ सालपछि नेतृत्वमा रहेको पुस्ताले पार्टीको कार्यकारी पदमा अब हामी बस्दैनौं भन्नुपर्योे। ‘हामीले पार्टीलाई यहाँसम्म पुरायौँ अब तपाईहरु लैजानुस्’ भन्नुपर्‍यो। हाम्रो आग्रह हो यो, उहाँहरूले चाहनुभयो भने असम्भव त छैन नि। त्यसो भयो भने पार्टीलाई त्यसले निकै हित गर्ने छ। यो पहिलो चरणको कुरा हो।
विशेष महाधिवेशनमा पनि अहिलेकै नेतृत्व पुस्ता जान खोज्यो भने ०४८ सालपछि पार्टी नेतृत्वमा रहेको त्यो समूहले अब पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनाउँछ। आफूलाई रिभाइभ गर्न सक्छ त? पार्टी नै रहन्छ त?
रहन्न। त्यसैले उहाँहरूलाई आफ्नो भूमिका परिवर्तन गरेर अभिभावक बन्दिनुस् भनेको हो।
उहाँहरूले त्यसरी छोड्नुभएन भने महाधिवेशनमा उहाँहरूलाई रोक्ने प्रयास गर्छौं। १३ औ‍ं महाधिवेशनमा हाम्रो पुस्ता कार्यकारी पदमा पुग्नुपर्छ भनेर प्रयास गरेको हो तर सकिएन। अब पनि मेरो त्यो प्रयास रहन्छ। मलाई लाग्छ हिजो मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेको त्यो प्रयास पार्टीको ठूलो पंक्तिले अहिले महशुस गर्नुभएको छ। अझ गर्दै जानुहुन्छ र महाधिवेशनमा जाने बेलासम्म त्यो ठूलो तागत बन्ने छ। हामीले बनाउँछौं पनि।
महाधिवेशन बोलाइन भने के गर्ने भन्ने हामीले छलफल गर्दै जानेछौं तर अहिलेको पहिलो प्रयास महासमिति बोलाउँ भन्ने हो। त्यसको निश्चित प्रतिशतले महाधिवेशन बोलाउन मिल्छ। अझ महासमितिको छलफलमा नेतृत्वको आगामी प्रयास के हुन्छ भनेर अनुमान लागाउन सकिन्छ।
मलाई लाग्छ महासमिति बोलाएर त्यसैबाट कुरा टाल्ने र आलटाल गर्ने रणनीति उहाँहरूको रहने छ। हामीले त्यही प्लेटफर्म प्रयोग गरेर विधान संशोधन गराएर यो विशिष्ट परिस्थितिमा महाधिवेशन अघि सार्ने भन्यौं भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने बुझाइ हो। त्यसकै लागि हाम्रो प्रयास रहन्छ। हामीले के सम्झियौं भने यस्तो तदर्थ संरचना र विश्वास गुमाएको नेतृत्व हतोत्साहित कार्यकर्ताको पंक्ति अलमलिएको पार्टीको तह र तप्का छ। सानो सुधार गरेर साढे २ वर्षपछि बल्ल महाधिवेशनमा जाने हो भने कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। त्यो मूल्य अर्को चुनावमा गएर चुकाउनुपर्छ।
अहिले कांग्रेस सुधारका लागि मुख्य ४ एजेण्डा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
पहिलो, सिद्धान्तको पूनर्व्याख्या। हामीले स्थापनाकालदेखि जे भन्दै आयौं अबको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले नयाँ परिभाषा खोज्नुपर्‍यो। राष्ट्रियता,प्रजातन्त्र र समाजवादको न्यारेटिभको नयाँ परिभाषा बनाऔं।
दोस्रो, अहिलेको समकालीन राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेसको पोजिसन बनाउनु पर्‍यो। यावत मुद्दाहरू छन् तिनमा अडान के हो कांग्रेसको?
संघीय नेपालमा कांग्रेस पार्टीको संरचना कस्तो हुने भन्ने यो तेस्रो एजेण्डा हो।
र चौंथो नेतृत्व परिवर्तन हो।
चुनावमा यत्रो हार बेहोर्नुपर्‍यो। हाम्रो नेतृत्व त्यसको समीक्षा गर्न तयारै भएन। अहिले हामीले त्यही समीक्षाको लागि दबाब दिइरहेका छौं।
त्यसैले तत्काल केन्द्रीय समिति बोलाउनुपर्‍यो। त्यसपछि महासमिति बोलाउनु पर्‍यो। विधानअनुसार पनि नै यही वर्ष महासमिति बैठक बस्नुपर्ने थियो।
महाधिवेशनको तयारीको अघिल्लो र महाधिवेशनको पछिल्लो वर्षबाहेक अरु बेला वर्षेनी महासमिति बैठक हुनु पर्ने पार्टी विधानमा उल्लेख छ। यो नियमित प्रकृया भयो। त्यसैले पहिले केन्द्रीय कार्य समिति र तुरुन्तै महासमिति बैठकको कार्यतालिका तयार गरियोस् भनेको हौं‌।
विशेष महाधिवेशन होस भन्ने हामी चाहन्छौं तर चुनावकै समीक्षा गर्न तयार नभएको नेतृत्वलाई विषेश महाधिवेशन बोलाउ भनेर त झन् बोलाउँदैन त्यसैले हामीले अहिले प्रकृयासम्मत माग राखेको हो।
केन्द्रीय समितिमा विषेश महाधिवेशनको माग गर्छौ, महासमितिमा लगेर प्रस्तावै गर्छौं। तर त्यसका लागि मञ्च त तयार गर्दिनुपर्‍यो। त्यही गर्न हाम्रो नेतृत्व तयार भएन। हामीले दबाबै दिएनौं भने त नेतृत्वले महाधिवेशन चार वर्षबाट बढाएर साढे पाँच वर्ष पुर्‍याउनुहुन्छ।
हाम्रो पार्टी भित्र दुई मत छ। यही नेतृत्वलाई राख्न चाहनेहरू के भन्नुहुन्छ भने, यो निर्वाचनको परिणाम वामका कारणले यस्तो आएको हो। हाम्रो मत घटेको छैन बढाएको छ। समानुपातिकको यत्रो मत आएको छ।
निर्वाचनको परिणाम यस्तो आउनुमा खाली वाम गठबन्धन मात्र होइन भन्ने हाम्रो कुरा हो। हाम्रो नेतृत्व सरकारमा हुँदा भएका कामजोरीहरु, चुनावमा पार्टीले प्रचारप्रसारको जुन रणनीति अपनाउनुपर्थ्यो जे कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। उम्मेदवारको चयन नै जित्ने गरी हुन सकेन। पार्टीलाई विधानले कल्पना गरेजस्तो पूर्ण चुस्तदुरुस्त अघि लगिएन। हामीले गरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन बलियो बनाउन सकिएन। घोषणा पत्रमा धेरै कुरा लेख्यौं तर जनतालाई बुझाउन सकेनौं। वाम गठबन्धनले स्थिरता दिन्छु भन्यो तर समन्वयात्मक भूमिका भएको पार्टी हामी हौं, वैचारिक हिसाबले अतिवादमा विश्वास गर्ने पार्टी हामी हैनौँ त्यसैले खास स्थिरता दिन सक्ने हामी हौं भन्न सकेनौं। प्रतिद्वन्द्वी आरोप चिर्न हामीले सकेनौं। त्यसकारण हामी हार्‍यौं।
यी सबै कुरा मूल नेतृत्वमा गएर ठोकिन्छ। उसको कमजोरी छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामीले यसो भन्नुको अर्थ त मूल नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर ठाउँ खाली गर्नुपर्यत र अभिभावकको भूमिकामा बस्नु पर्‍यो भन्ने हो।
नेतृत्व परिवर्तन अबको मुख्य एजेन्डा हो। ७० वर्षभन्दा बढीको नेतृत्वमा बस्न नपाइने भनेर उमेरकै हदबन्दी तोक्नुपर्छ पनि हामीले भनेका छौं। लामो समय पार्टीको नेतृत्वमा बसेका नेताहरू अब अभिभावकको भूमिकामा बसिदिनु पर्‍यो भनेर पनि हामीले भनेका छौं। एउटै शैलीबाट कांग्रेस धेरै समय चलिरह्यो। यही शैलीले अब कांग्रेस परिवर्तन भएको आभास गराउन सकिँदैन।
कसरी गर्ने भन्ने सिलसिलामै केन्द्रीय समिति, महासमिति र विशेष महाधिवेशनको कुरा गरेको हो। नैतिकताको आधारमा छोडिदिए त त्यो राम्रो हुन्थ्यो। तर हाम्रो नेतृत्वबाट हामीले त्यस्तो आशा राख्दैनौँ त्यसैले प्रकृयागत ढंगले अघि जान हामीले केन्द्रीय समिति महासमिति मागेको हो हो।
हाम्रो एजेण्डा नै अहिले नीतिगत पक्षबाट पनि कांग्रेसलाई आधुनिक बनाउने संगठनात्मक पक्ष पनि आधुनिक बनाउने, कांग्रेस परिवर्तन भयो भन्ने सन्देश दिने हो। सबै पक्षमा सुधार गर्दा नेतृत्व सुधार भएन भने कसैले पनि कांग्रेस परिवर्तनको बाटोमा गयो भनेर पत्याउँदैन।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १७, २०७४, ०४:४२:५३